စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးသို့………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးသို့……….
Posted by marblecommet on Oct 9, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Critic | 33 comments
စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်တွေ့အရ စာရေးသူတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ စာရေးသူတို့ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးဟာ
စာရေးသူအတွက် မဟာအင်အားတစ်ခုဆိုတာပါပဲ ချစ်စွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ့။ စာရေးသူရဲ့
ပရိသတ်ကြီးအားပေးမှုကြောင့်သာ စာရေးသူဟာ စာရေးဖို့အတွက် အားအင်တိုးပွားလာရသလို
စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း စာရေးသူအနေနဲ့ လွန်စွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို စာရေးသူ
ပြောပါရစေ စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ့…..။
ပရိသတ်ကြီးသိတဲ့အတိုင်း စာရေးသူတို့နိုင်ငံဟာ အခုဆိုရင် ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းကာလကို
ရောက်ရှိနေပြီမဟုတ်လား။ ဒါဟာ စာရေးသူတို့ ပရိသတ်ကြီးတို့ အနှစ်နှစ်အလလ မျှော်မှန်းခဲ့ကြရတဲ့
အခြေအနေမဟုတ်ပါလား စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရယ်။ အဲဒီအခါမှာ စာရေးသူ ပြောချင်တာကတော့
အဲလို နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ အွန်လိုင်းမီဒီယာဆိုတာကလည်း စာရေးသူအတွက်
လွန်စွာမှ အရေးပါလာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ့….။
အဲဒါကြောင့် စာရေးသူမှာဆိုရင် ဖေ့ဘွတ်အကောင့် ခွန်(၇)ခုတိတိ ရှိပြီးတော့ ဂျီတော့ အကောင့်က တစ်ဒါဇင် တိတိရှိပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ် အကောင့်တစ်ခုတစ်ခုမှာဆိုရင် စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ် ပျမ်းမျှ ငါးထောင်ရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့
ပရိသတ်ကြီးကို အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် (၃၅၀၀၀)ရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်။ အဲဒါတောင် Subscribe ပရိသတ်ကြီးမပါသေး ဘူးနော။ ပြီးတော့ စာရေးသူရဲ့ ဂျီတော့ အကောင့်တစ်ဒါဇင်မှာလည်း မရေတွက်နိုင်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးမြောက်မြားစွာ ကျန်ရှိနေ ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ စာရေးသူဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ကို လူပေါင်း သုံးလေး ငါးသောင်းနဲ့ ဆက်ဆံနေရသူ၊ ထိတွေ့နေရသူ မဟုတ်ပါလား စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ့။ အဲဒီအခါမှာ စာရေးသူဟာ စာရေးသူရဲ့ ချစ်စွာသော ပရိသတ်ကြီးကို
တစ်ဦးချင်း အကြောင်းပြန်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုလည်း စာရေးသူရဲ့ပရိသတ်ကြီးခွင့်လွှတ်ကြစေဖို့ အနုအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျား…။ နောက်ဆို စာရေးသူရဲ့ လွန်စွာမှ ပြောင်မြောက်လှစွာသော အရေးအသားများ၊ မိမိရေးသားသော စာများကို ကြီးငယ်မဟူ ဖတ်ရှုကြသည့်ပရိသတ်ကြီးအားလည်း လွန်စွာမှ မလေးမစားမလုပ်ဝံ့စွာ ရေးသည့်အရေးအသားများနှင့် ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော်မလုပ်ဝံ့သော အရေးအသားများကို
တစ်လှေကြီးဖတ်ရတော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ် စာရေးသူရဲ့ ချစ်စွာသော ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျား..
ဟိုအချောင်း (ကလောင် ပြောပါတယ်) နာမည်ကလည်း
မောင်တည့်မတ် တဲ့ ဟီဟိ…
သရေပင် နဲ့ ပစ်ချင်ဇယာ ကွယ်…
ဒင်းက မှန်မှန်ကန်ကန် တည့်တည့်မတ်မတ်
အကောင့်အဲလောက်များတာ passward တွေမှတ်မိတာအံ့ရော. သူများမတော့ ရှိစုမဲ့စုအကောင့်လေးတခုစီတောင် မသုံးတာနည်းနည်းကြာတာနဲ့ မေ့ကုန်ရော..
လူဆိုဒါ သူ့ပါရမီနဲ့ သူ ဆိုဒေါ့
စာရေးဆရာမဖြစ်ခင် ဆိုင်းဝိုင်းဆရာများဖြစ်ခဲ့လေရောသလားကွယ် … အကောင့်ပေါင်းများစွာကို ဘယ်လိုများ reply လုပ်နေသလဲ ….
ရှင်းပလား စာရေးသူရဲ့ ပိတ်သတ်ညီမလေးရေ့
သို့ပေသည့် ကလောင်နာမည်ကြီးကတော့ သတ္တိတော်တော်မွေးဖတ်ရမယ့် စာရေးဆရာပါပဲ…
စာရေးသူက စာရေးသူရဲ့ ချက်မြှုပ်ဇာတိကို ဂုဏ်ပြုထားတာပါဗျာ…
ye thura hein says:
မိတ်ဆွေပရိသတ်ကြီး ညောင်းခါးရှည် (ကို)ကြီးမိုက်ပါလား ဟရို့
ညောင်ခါးရှည်က စာရေးသူရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို
အဲလို စာရေးဆရာမျိုးတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး …….. အံ့ရော……..
အနို့လို ဆြာဒွေ အနှီလိုရေးနေထှာက
စာရေးသူချင်းကိုထပ်နေတာပဲ စာရေးသူကြီးရဲ့ စာရွက်တွေနဲ့ရေးတဲ့ခေတ်ဆို မအောင်မြင်ခင်မှာတင် ခင်ဗျားမွဲရချည်ရဲ့ စာရေးသူကြီးရဲ့
စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုတော့ စာရေးသူ
တန်ဖိုးထားတာ အဟုတ်ပါ…စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရယ်
ဒါပေသိ စာရေးသူရဲ့ ပိတ်သတ်လို့ခပ်တည်တည်ပြောရင်း
စာရေးသူရဲ့ ချစ်စွာသော အန်ကယ်ဂျီးရဲ့
ဆရာ့ ကလောင်ကျိပြီး ကြက်သိန်းထသွားတယ် ဆြာရေ
မောင်တည့်မတ်(ပြွန်တန်ဆာ) – ကြက်သိန်းထ ဆိုပြီးသာ ပြောင်းလိုက်ပါတော့
အောင်မလေး .. .. …….. ကမ်းစိန်မရယ်
တပုဒ်လုံးဖတ်လာတာ ကလောင်နာမည်မြင်မှပဲ အော်ရယ်မိတော့တယ် ……….တော်သေးတာက အဲ့မြို့နားဖြတ်ဖူးလို့နာမည်မြင်ဖူးပေလို့ပဲ … မဟုတ်လျှင် ….မထိတ်သာမလန့်သာဟယ် :harr:
မောင်တည့်မတ် ဆိုဒါဒေါ့ ဟုတ်ဘာဒယ် ..
ဟို .. ပြွန်တန်ဆာ ဆိုဒါဂျီးဂဒေါ့ …
ကိုကမ်းဂျီး .. အဲလေ .. မောင်တည့်မတ်ဂျီးမှာ ..
ပိတ်သတ်တွေက အားဂျီးဘဲနော် …
အဲ့ပိတ်သတ်တွေထဲမှာ တောင်မလေး ခပ်ချောချောလေးဒွေ ပါဘူးလားဂျ ..
ပါရင် လက်တို့ဘာအုံး …
ပိတ်သတ်တွေလား အားကြီးပဲပေးဦးမှာ ပေးဦးမှာ….
စာရေးသူရဲ့မျက်စိရှေ့ ရိပ်ခနဲ မမြင်လိုက်နဲ့
အဲ့လာ စာရေးသူ ပိတ်သတ်ဖျစ်သွားဘီလို့မှတ်
ချစ်သော စာရေးသူရဲ့ ပိတ်သတ်အံဇာဂျီးယာ….
မန်းလေး-ထုံးဘိုလမ်း က ရွာသူနဲ့ပေးစားမယ် ။
ရွာနာမည်က “ဆောက်တောဝ” တဲ့
စာဖတ်သူရဲ့ ကိုယ်တွေ့အရ ….
စာရေးသူအတွက် မဟာအင်အားတစ်ခုဆိုသလို ….
စာရေးသူအတွက် ကောင်းစွာသော စိတ်ဓာတ်အင်အားဖြစ်သော….
စာဖတ်သူတို့အတွက် ကောင်းစွာသော အသိဥာဏ်ခွန်အားဖြစ်သော…
ဒီဇတ်လမ်းလေးကိုတော့ကြားဖူးသလိုပဲ ။ ဒီထက်ရှင်းသွားအောင်ထပ်ရေးဦးဗျာ
ကိုကမ်းရဲ့  ပုံမှန်လက်ရာတွေလည်းမျှော်နေမယ် နော
ကိုကမ်းဝေး(ခ) marblecomment (ခ)မောင်တည့်မတ် ရှင့်
စာရေးသူပိတ်သတ်လိုက်တော့ သေကုန်ရောလား :harr:
စာရေးသူကြီးရဲ့ စာတွေကတယ်ကောင်းပါကလား (နောက်မှဖတ်ကြည့်ရမယ်)
စာရေးသူကြီးရဲ့ အဲ ဘာရေးရပါ့ သိတော့ဘူး
မ မမ နဲ့ မရွှေကြည် တို့ကွန်မန့်ကို ကိုအလင်းဆက် သာဖတ်မိရင် နောက်တစ်ခါ“စ´´ အက္ခရာ အတွက်တော့ အတွေးတစ်ခုရပါပေါ့။
ရိဒါးဒိုင်ဂျက်မှာ ပါတဲ့ ဟာသတစ်ပုဒ်ကို ဒီကလူတွေ ဝိုင်းဘာသာပြန်ကြတဲ့ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုပါလား
တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှာ ပါမောက္ခတစ်ယောက်က သူ့ တပည့်တွေ ကို လက်ချာအပြီးမှာ မေးခွန်းတစ်ခု ထုတ်လိုက်သတဲ့.. အဖြေကို စာတမ်းတင်ပေါ့ဗျာ
“ တီကောင် တစ်ကောင်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းရှိတဲ့ တွင်းတစ်ခုထဲ တန်းဝင်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ” ဆိုပြီးပေါ့လေ
နောက်နေ့ ကြ.. အဖြေစာတမ်းတွေ လာတင်ကြတာပေါ့
အဲဒီထဲကမှ .. ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ပါမောက္ခ က ခေါ်ပြီး.. “ မင်းအဖြေက အကောင်းဆုံးမို့ ဆရာက အေပလက်စ် ပေးလိုက်တယ် ၊ နောက်ပြီး မင်းအဖြေအတွက် ဆရာ့မိန်းမ က ဝီစကီတစ်ပုလင်း ဆုချတယ် ”
ကျောင်းသားဖြေခဲ့တဲ့ အဖြေက… တီကောင်ကို တောင့်ပြီး ဖြောင့်သွားအောင် ကော်နဲ့ သုတ် ၊ ပြီးမှ တွင်းထဲ ကို ထိုးသွင်းထည့် တဲ့
အခု ရဲဘော် ရဲ့ နာမည် “မောင်တည့်မတ်(ပြွန်တန်ဆာ)….” ဆိုတာကို မြင်ရတော့
ဆေးဝါးကောင်းတွေ အဆက်မပြတ် မှီဝဲပုံရတယ်လို့ များလားရယ်လို့ ပါလေ
လောကကြီးမှာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှု အရှိဆုံးနေရသူတွေဟာ ကျပ်မပြည့်သူနဲ့ ရူးသွတ်နေသူတွေပါ။ မောင်တည့်မတ်(ပြွှန်တန်ဆာ) အနေနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်(၇)နှစ်ခု ဂျီတော့ အကောင့်တစ်ဒါဇင်နဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှု အရှိဆုံးသူဘ၀နဲ့ ပျော်စရာ စာပေတွေ ရေးရင်း ပျော်နိူင်ပါစေဗျား…………….